﻿ कालीगण्डकीमा स्टिमर सरर
२०७६ साल कार्तिक ७ गते बेलुका मिर्मीमा बाँस बस्यौँ । भोलिपल्ट कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजना र त्यसको जलाशयमा सञ्चालित स्टिमर सयर गर्ने सोच बनाएर त्यो रात मिर्मी स्याङ्जाको होटलमा बाँस बसियो । खानासाना खाइयो सुतियो ।
भोलिपल्ट बिहानै सबैले आआफ्ना झोलिझ्याम्टा गाडिमा राखेर हिड्दै झरियो कालीगण्डकी परियोजना अवलोकन भ्रमण गर्न ।
सेतिवेणी कालिगण्की किनारमा पर्वत जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्दोरहेछ । यो स्थान पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्मा बजारदेखि लगभग २०कि.मी.दक्षिण मिर्मीदेखि लगभग १५ की.मी.उत्तर र वालिङ् बजारदेखि लगभग ४० कि.मी.पश्चिमको दुरिमा पर्दोरहेछ ।
पर्वतको मिर्मिमा १ सय ४४ मेघावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजना निकाल्दा बाध अर्थात बि.सं.२०५८ सालमा हाइड्याम बनाउने क्रममा मिर्मीदेखि सेतिवेणीसम्म ७ किलोमिटर जति पानी जमेर हरियो जलाशय अथवा ताल निर्माण भएको रहेछ ।
यो कालीगण्डकी “ए” को बाध बन्नु नै मिर्मी बासिन्दाको लागि भाग्य बनेर आएछ । कालिगण्डकी वारिपारि हरियो पानीको जलाशयको दृष्यले सबैको मन लोभ्याउने रहेछ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कालीगण्डकीूएूजलविद्युत परियोजना बन्ने क्रममा मिर्मी नजिकैको हाइड्याम साइटबाट गुल्मी, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको संगमस्थल सेतीबेणीसम्म ७ किलोमिटर दूरी रहेछ । कालीगण्डकीको जलाशय बनेपछि स्थानीयहरुको हितकालागि नेपाल सरकारले स्टिमर सञ्चालनमा ल्याएको रहेछ ।
कालीगण्डकीको हरियो जलाशयमाथि तैरिएको ३÷४ वटा स्टिमरमा मानिसको भिड थियो । एकैछिन त मलाई अचम्म पनि लाग्यो।डरपनि लाग्यो । मानिसले गरे हुने रहेछपनि लाग्यो।विष्णुको रुप मानिएको शालिकग्रामको महत्व बोकेको नदीमाथि स्टिमर जलयातायातको सञ्चालन पश्चात स्थानीय बादिन्दाले आफ्नो जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था उकास्न त्यो स्टिमर नै भगवान सावित भएको भान हुन्थ्यो ।
मिर्मीबाट ४५ मिनेटजतिको स्टिमर यात्रापश्चात सेतिवेणी पुगिने रहेछ । एकपटकमा ६० जनासम्मले यात्रागर्न सकिने त्यो स्टिमरको यात्राले पानीजहाजको झल्को आउँदो रहेछ । व्यासायिक रुपमा जल यातायात स्टिमर सञ्चालनमा आएपछि स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मी जिल्लाको संगम स्थलरहेको सेतीवेणी बजारमा पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोरहेछ । ती तीन जिल्लाका धेरै बासिन्दाले स्टिमरको सुविधापश्चात् आवतजावत गर्न र सामन ओसारपसार गर्न आफूलाई सहजताको अनुभूत गरेका रहेछन ।
स्टिमर चल्न लाग्यो । एकैछिन त म आत्तिएँ । डिल्लीराम सर,बुध्दिमान सर,भानु सर लगाएतको एउटा समूहले स्टिमरको यात्रा नगर्ने जानकारी आयो । मलाईपनि क्यै हुने पो हो कि भन्ने कताकता डर लागेको थियो । आ ! केहि हुन्न !! सबै मानिसहरु स्टिमरमा चढेका छन् ।
म चाहिँ किन नजाने सोचेर मनको डर भगाउदै हुलास सर, टेकनाथ सर, हरि सर, चिन्तामणी सर, पुष्प गुरागाई सर, श्याम पोख्रेल सर, खगेन्द्र सर, जलवर्षा राजवंशी, खड्ग पराजुली धेरै जना स्टिमरमा चड्यौँ । एकचोटिमा ६० जनासम्म एउटा स्टिमरमा अटाइदो रहेछ ।
गुल्मी, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लाका डाडाहरुको भूगोल रिउघा, अस्लेवा, ठूलोलुम्पेक, अर्मिचौरको भूगोल हेर्दै हामीले स्टिमरको यात्रा गदै कालीनदीको गल्छी कटेपछि एकैछिनमा सेतिवेनी पुग्यौँ ।
स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मी तीन जिल्ला जोडिएको कालिगण्डकीको किनारमा सेतिवेणी रहेछ । स्टिमरबाट उत्रेपछि १०÷१२ मिनेटको पैदलयात्रा पश्चात १ सय ३० मिटर अग्लो प्रख्यात शालीकग्रामको महाशिलास्थल समुद्र सतहदेखि ५२० मिटरको उचाइमा रहेको धार्मिकस्थल पुगिदो रहेछ ।
त्यो शालिकग्रामको मुनि गुफापनि रहेछ । यो महाशिला स्थल पर्वत जिल्लामा पर्ने कुरा स्थानीय बासिन्दा बताउथे ।
महाशिवरात्री, नागपञ्चमी, बालाचुर्दशी, रामनवमीजस्ता तिथिमिति र चाडपर्वको अवसरमा मेला लाग्दो रहेछ अनि टाडाटाडाबाट तिर्थालु र भक्तालुहरु धार्मिक पर्यटकहरु महाशिलाअवलोकन आउँदा रहेछन् । हामीले पनि अवलोकन गर्यौं । पुजाअर्चना गर्यौं । नजिकै रहेको झोलुङ्गे पुलबाट मान्छेहरू दोहोरिलत्त आवतजावत गर्दै गरेको देखिन्थ्यो ।
कालीगण्डकी “ए” जलविद्युत परियोजना, मिर्मी–सेतिबेनी ७ किलोमिटर स्टिमर सञ्चालन तथा नवलपरासी गैँडाकोटबाट बुलिङ्टार हुँदै पाल्पाको पिपल डाडा–रानीघाट–१८ किलोमिटर बाटो, रानीघाट–रुद्रबेनी ३७ किलोमीटर बाटो, रुद्रबेनी–बाग्लुङ्ग–८८ किलोमिटर, बाग्लुङ–बेनी १८ किलोमिटर गरि जम्मा २९१ किलोमिटरको सडक निर्माण गरि कालीगण्डकी करिडोर परियोजना सफल भएमा स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मी जिल्लाको कायापलट हुने गतिलो सम्भावना देखियो ।
मिर्मीदेखि स्टिमर चढेर सेतीबेणीसम्मको ७ कि.मी. जलयात्राभरि प्रायः सबैजना निक्कै हर्षित हुनुहुन्थ्यो । भिडियो लिनुहुन्थ्यो, फोटो खिच्नु हुन्थ्यो । सबैजना सेतीबेनी पुगियो । सबैभन्दा ठूलो शालिग्रामस्थल पुगेर पुजाअर्चना गरि फर्किन लाग्दा नवलपरासीबाट शैक्षिक भ्रमणमा आएका विद्यार्थीहरुसङ्ग भेट भयो ।
त्यहाँका विद्यालयले सेतीबेनी र त्यो जलविद्युत परियोजना शैक्षिक अवलोकन भ्रमण गर्न शिक्षक विद्यार्थी सम्मीलित टोली आएको बुझिन्थ्यो । यसरी त्यो स्थान शैक्षिक भ्रमणस्थलको रुपमा पनि विकास भएको बुझियो ।
त्यसपछि हाम्रो टोली फर्कियो । त्यही स्टिमर चडेर मिर्मीतर्फ । मिर्मीमा पुनः आएर खाना खाने बेटुङ्गोका कारण सिधै पाल्पा पुगेर खाना खाने भन्दै लागियो पाल्पातर्फ ।
लालिगुरास होटल एण्ड सेकुवा कर्नरमा शिवरात्रिको अवसरमा कन्सर्ट
खेलकुद सप्ताह : महेन्द्रलाई हराउँदै जनता क्याम्पसले जित्यो भलिबलको उपाधि
चीनद्वारा अमेरिकी पत्रकारलाई पाँच दिनभित्र देश छाड्न आदेश
सडक मिचेर नाला निर्माण गरेको भन्दै बराहक्षेत्रका रेल्वेवासिहरु आन्दोलनमा
इटहरीको जनता स्कुलका विद्यार्थीले मनाए प्रजातन्त्र दिवस
६ दिनमै मास्क उद्योग बनाउँदै चीन